ကျည်စစ်/ကျည်မှန်များဖြင့် ပစ်ခတ်သည့် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်မည်ဟု တရုတ် ရေတပ်ကြေငြာ – CharTake
chartake | August 13, 2020 | International News | No Comments
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာန၏ ၁၀ – ၈ – ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ တရုတ်ရေတပ်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက် မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ Zhoushan ကျွန်းအနီး ရေပြင်၌ ကျည်စစ်/ကျည်မှန် များဖြင့် ပစ်ခတ်စဉ် များပြုလုပ်ကာ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်မည့် ဧရိယာအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်၌ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တရုတ်ရေတပ်အနေဖြင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်း မြောက်ဘက်မှ အကွာအဝေး ၃၄၀ မိုင် ခန့်ရှိ Zhoushan ကျွန်းအနီး ရေပြင်နှင့် ကျွန်းစုများအနီးတွင် အဆိုပါစစ်ရေး လေ့ကျင့်မှုအား (၂) ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါ သည်။
တရုတ်ရေတပ်အနေဖြင့် ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်း အပိုင်းအား ( ၁၁ . ၈ . ၂၀၂၀ ) ရက်နေ့မှစ၍ ၃ ရက် တိုင်တိုင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်မည့် ရက်တွင် နံနက် ၆ နာရီမှ စ၍ နေ့လည်ခင်းပိုင်းအထိ လေ့ကျင့်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်စဉ်အတွင်း အခြားသော မသက်ဆိုင်သည့်ယာဉ်များ လေ့ကျင့်ခန်း ဧရိယာအတွင်းသို့ မရောက်ရှိ နိုင်ရေးအတွက် ကန့်သတ်မှု ဧရိယာများလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
တရုတ်နှင့် အမေရိကန် ရေတပ်တို့သည် လက်ရှိအချိန်၌ တောင်တရုတ် ပင်လယ်အတွင်း ကိုယ်စီ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများအား ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း တရုတ် ရေတပ်အနေဖြင့် ထိုင်ဝမ်အနီး လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်ရေတပ်အနေဖြင့် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတွင် ပုံမှန်စစ်ဆင်ရေးများပြု လုပ်လာကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အမေရိကန် အဆင့်မြင့် အရာရှိတစ်ဦး ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာ ခြင်းကို တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တရုတ်ရေတပ် အနေဖြင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ် အတွင်းတွင် ယခုကဲ့သို့ မိမိရေကြောင်းစွမ်းအားကို ပြသကာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါပါသည်။ Crd ; Mg Moe